Dhaleeceyn kulul oo loo jeediyay Laanta afka soomaaliga ee British Broadcasting Corporation.
Waxaa Khamiistii shir iskugu yimid wasiirada dowlad goboleedka puntland kaas oo ka dhacey magaalo madaxda puntland ee garowe waxaana looga hadlayay maxkamad dastuuri ah loo la damacsan yahay in loo sameeyo puntland, hase ahaatee waxaa ay wasiiradu dhaleeceyn usoo jeediyeen laanta afka soomaaliga ee British Broadcasting Corporation iyagoo ku eedeeyay in aysan dhex dhexaad ka ahayn wararka ay puntland ka sheegaan.
Waxaana sidoo kale Khamiistii (July 5, 2007) warqad shaqo ka fariisan ah uu wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Puntland Mudane Cabdirahman Maxamed Bankax uu u gudbiyay weriyihii puntland u joogey British Broadcasting Corporation, Axmed maxamed cali (Ahmed kismaayo) iyadoo loo diidey in uu ka shaqeeyo deegaanada puntland uuna war oga tabiyo British Broadcasting Corporation.
British Broadcasting Corporation waxaa lagu eedeeyay in aysan dhex dhexaad ka ahayn waxa ka dhaca dowlad goboleedka puntland ayna sheegina hormarka ay puntland ku talaabsadtey sanadihii ugu dabeeyay, hase ahaatee waxa ay ku eedeeyeey in ay u janjeerto gobolada koonfureed iyo kuwa waqooyi oo ay laantaasi bbcda ay si weyn u faaniso una buunbuuniso wararkeeda si wacana oga waranto.
Isku soo wada duuboo laanta afka soomaaliga waxaa ay dad badani ay sheegayaan ama ay ku eedaynayaan in aysan dhex dhexaad ka ahayn wararka ay ka baahiso deegaanada maamul goboleedka puntland ee soomaaliya ee ay siideyso wararka xun xun ee wax u dhdimaya deegaanada puntalnd hase ahaatee dhinaca wanaagsan kama waranto waa sida la sheegaye.
Hoos u dhac ku yimid Sarifka Doolarka Magaalada Boosaaso
Hoos u dhac weyn ayaa ku yimid sarifka lacaga qalaad ee magalada boosaaso oo labadii maalmood ee ugu danbeeyay gaarey heerkii ugu sareyey ee uu abid gaaro.
Mar aan saaka booqdey suuqa sarifka lacagaha qalaad ee doolarka loo yaqaan ayaa waxaa suuqa doolarka laga dareemayay hoos u dhac ku yimid sarifka doolar magaalada boosaaso.
Maalintii shalay ahayd ayaa waxaa cabasho shaqo joojin ah muujiyay ganacsada suuqa weyn ee magaalada boosaaso iyadoo ay albaabadu u xirnaayeen shalay meelo badan oo ka mid ah suuqa weyn ee magaalada boosaaso.
Ganacsada suuqa ee magaalada boosaaso ayaa waxa ay ka cabanayeen sarifka doolarka oo shalay gaarey heerkii ugu sareeyay ee uu gaaro sarifka doolarka ee suuqyada puntland iyagoo ganacsatadu muujiyay in ay si weyn ugu xun yihiin,
Isku soo wada duboo waxaa kor u kaca safrika doolarka loo aaneynayay labadoo cishe oo lasoo dhaafey iyadoo ay suuqyada magaalada soo buux dhaafiyeen lacago cusub oo faalso ah oo kun kun ah oo lagu soo daabacey magaalada boosasao.
Faafin: SomaliTalk.com | July 6, 2007